ဘင်္ဂလီမျိုးတုန်းသတ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို Al Jazeera မှ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်လွှင့်မည် ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
ဘင်္ဂလီမျိုးတုန်းသတ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို Al Jazeera မှ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်လွှင့်မည်
Postado Wednesday, December 5, 2012 at 4:36 AM
ဘင်္ဂလီကုလားများ အတွက် အသံလွှင့်ပေးနေ သည့် ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် နာမည်ကြီး အယ်လ်ဂျ ဇီးရား သတင်းဌာနက ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ကစပြီး (၁၃) ရက်နေ့ထိ The Hidden Genocide လို့ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတဲ့မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြသ တော့မယ် လို့ သိရပါတယ်။
အဘွားအို တုတ်ကိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်နေရတဲ့ ရခိုင်
ဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု (Genocide) လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ရတဲ့နေရာကို ကျွန်ေ တာ် တို့ရောက်နေပြီ လို့ နိုင်ငံတကာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရှင်များ အသင်း ဥက္ကဌ ပါမော က္ခ William Schabas ကပြောပါတယ်။
အယ်လ်ဂျဇီးရားရဲ့ စာနယ်ဇင်းရုံး ကတော့ ဇွန်လအတွင်းမှာ ၇၈ ယောက်သေ ဆုံးတယ်လို့မြန် မာအစိုးရက သတင်း ထုတ်ပြန် တာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သတ်ဖြတ်ခံ ရတဲ့နေရာတွေ ထဲက အစိတ်အပိုင်း တစ်နေရာ က သတင်း ဘဲဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုပြသမယ့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုမှာ ဇွန်လ အတွင်းမှာ လူပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို ငါးရက် အတွင်း သတ်ဖြတ် ခဲ့ တာ၊ ကျင်း အကြီးကြီးနှစ်ခု ထဲမှာမြှပ်ခဲ့ တာတွေကို သက်သေခံ မှာဖြစ်ပါတယ်။
* စစ်တပ်၊ နစက၊ လုံထိန်းတွေက ပစ်သတ် လို့သေခဲ့ရတဲ့ ၃၅ ယောက် (ကလေး ၂၅ ယောက်) ကိုမြှပ် ထား တဲ့ေ နရာ
* သတ်ဖြတ် ခံရတဲ့လူ ၁၀၀ ကျော်ရဲ့ အလောင်းတွေကို ကုန်တင်ကားနဲ့ သယ်သွားတာကို မျက်စိနဲ့ကိုယ် တိုင်မြင် ခဲ့ ရတဲ့မျက်မြင် သက်သေ (ဘင်္ဂလီတစ်ယောက်က ငိုပြပါလိမ့်မယ်)
* လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကို ဓါတ်ဆီပုလင်းနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီး မီးရှို့တဲ့ အကြောင်း
* ဘာသာရေးပညာရှင် ၄၀ ကိုဗလီထဲကိုခေါ်ပြီး အားလုံးကိုသတ်ပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်း ( ပုံပြင်တစ်ခုလို ဇာတ်လမ်း ဆင်ပြီး ပြောကြပါလိမ့်မယ်)
* အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို မောင်နှမ၀မ်းကွဲ ၅ ယောက်ရှေ့မှာ ရဲတွေက မီးပုံကြီးထဲကို မီးရှို့ သတ်တဲ့အကြောင်း ( ဇာတ်လမ်းလမ်းဆင်ကြတယ်)
* အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးပြီး သေတဲ့အထိညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်း၊ ရဲစန်းမှာအလောင်း ၆ လော င်ြး မင် ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း( ဇာတ်လမ်းဆင်ကြတယ်)
* အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို စစ်သား၊ လုံထိန်း၊ နစက အယောက် (၂၀) ယောက်က၀ိုင်းပြီး မုဒိန်း ကျင့်တဲ့ အကြောင်း (ဇာတ်လမ်းဆင်ကြတယ်)
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကစပြီး ဘင်္ဂလီတွေကို လူမျိုးတုန်းသုတ်သင်ခဲ့တာတွေကို ဒီမှတ်တမ်း မြှာ ပသမှာဖြစ်ပါတယ်။
အယ်လ်ဂျဇီးရားရဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့အရဗီအစီအစဉ်မှာဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့ကစပြီး(၁၃)ရက်နေ့ထိ နေ့စဉ် ပြသ မှာဖြစ်ပါတယ်။
(သောက်ရူးတွေ.. ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်တောင် မနည်း အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ကြားထဲ။ မြွေပူရာ ကင်းမှောင့်။ မင်းတို့အဘ တတိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင် တွေကို သွားပြောကြပါလား၊ ကျွန်တော်တို့ မွတ်ဆလင်ပါဆိုပြီး သဲကန္တာ ရထဲ သွားနေကြပါလား။ စိုင်းသိန်းဝင်း နျူကလီင်္းယားစက်ရုံကြီး အကြောင်းလည်း ဒီလိုပဲ လွှင့်ခဲ့တာ ပါပဲ ဘင်္ဂလီငမိုက်သားများရေ။)
ဒီဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရင်တော့ ဘင်္ဂလီများဟာ ဘယ်လိုသနားစရာ ကောင်းကြောင်း မီဒီယာ အားကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ မီဒီယာတွေက၊ အွန်လိုင်း သံယောင်တွေက ပြည်တွင်းမှာ ဆူပူဖို့ သံဃာကို သံဃာအလုပ် မလုပ်နိုင်အောင် သွေးထိုးဖို့ လုပ်နေချိန်မှာ ဘင်္ဂလီတွေက ဒီလို ဗီဒီယိုတွေ တင်ပြီး ၀ါဒဖြန့်နေကြပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။
The Al Jazeera team discovered that official statements provided onlyasmall part of what took place.
.Instead, Rohingya testify suffering systematic torture, ethnic cleansing and execution-style killings. The program found evidence of at least two mass graves and the deliberate murder of minors, some of whom were burnt alive. The program includes eyewitness accounts of the extra-judicial killings of more than 200 people during five days in June
I don't know original Link, I copy this post from OppositEyE Blog
Tags: ဗဟုသုတ, လူမှုရေး, သရော်စာ